Parrot OS kugoverwa kweLinux kwakangofanana neKali Linux | Linux Vakapindwa muropa
Kune zvakawanda zvakagoverwa zvakanangana nekuchengeteka uye pentesting, imwe yeinonyanya kuzivikanwa ndeye Kali GNU / Linux, asi kune zvimwe uye zvei tataura mune zvimwe zvinyorwa yeiyi blog, mamwe acho akananga zvakanyanya kune mamwe mabasa. Asi nhasi tiri kuzokubata iwe Parrot OS, distro yakafanana chaizvo neKali.
Pasina kupokana Parrot OS inogona kuve yakanaka imwe nzira yeKali nevamwe. Kugovera kwakagadzirwa ne timu yevaItaly hackers inonzi FrozenBox, avo vakanyatsoteerera kuwedzera kuwanda kwematurusi ekupenda, macomputer forensics, reverse engineering, kusazivikanwa kubhurawuza pawebhu uye cryptography.
Parrot OS yakavakirwa paDebian Yakagadzika, seKali GNU / Linux uye nekudaro vane yakanaka base kubva kwavanotanga kupa kugadzikana, kuita uye kusimba. Iyo desktop iri MATE 1.8.1 uye inouya ne 3.16.7 kernel mune yayo yazvino vhezheni. Iyo zvakare ine dingindira rinodaidzwa kuti Denderedzwa semifananidzo neyakajairwa "kubira girini" matoni ekupa inonakidza nharaunda.
Kana iwe ukavhura menyu, nhamba isingaperi yezvishandiso inoratidzwa yatinogona kushandisa, yakakamurwa muzvikamu kuti inyorwe ivo nenzira inonzwisisika. Chikamu chinokwezva ndeye Anon Surf, ine chinyorwa che svetesa internet nenzira asingazivikanwe naTor uye I2P, uye izvo zvakare zvinosanganisa chirongwa chinonzi anonsurf maneja iri kutarisira kudzima otomatiki mapurogiramu aanoona seasina kuchengeteka uye nekuchenesa cache.
Isu tinowana zvakawanda zvakafanana naKali, bhurawuza racho rakafanana, kureva Iceweasel, browser risingaremi rinobva paFirefox uye iro rinogona kushandisa TorChat kana kuwana iyo Pandora Box sevhisi. Ehe uchawana mamwe maturusi aunowana muKali, akadai seMetasploit, Aircrack-ng, Hydra, John, nmap, owas-zap, nezvimwe. Kana iwe uchirwa neiyo terminal uye ukasarudza iyo graphic mode, pane nhau dzakanaka, Anwendung inonzi AirMode yakabatanidzwa, inova GUI yeAircrack.
Izvi zvinoitikawo neZenmap, inoratidzira nmap iyo ichaita kuti hupenyu hwako huve nyore kana uchishanda uye yaive zvakare muKali Linux. Y rondedzero yezvishandiso inogona kusingaperi, nebanga rose remauto eSwitzerland rekubira paminwe yako yaunogona kushandisa muLive mode kana kuisa pakombuta yako. Nenzira, password yekushandisa uye mushandisi zvakare zvakafanana neKali, ndiko kuti, "toor" uye "mudzi" zvichiteerana.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Kugoverwa » Parrot OS: kumwe kukwikwidzana kweKali GNU / Linux
Ivan Ucha Ramirez akadaro
Zvakanakisa kwazvo ndanga ndisingazvizive, zvakanaka kwazvo kuti dzimwe nzira dzinomuka, zvisinei nekuti Kali Linux yakanaka sei, kana paine makwikwi havazombofa vakazorora zvavo.
Ndihwo zvakare runako rwe linux / unix, kuti kune migove uye nzira dzekuitira zvinhu kune wese munhu, kwete hwindo remunhu wese zvakaenzana;).
Pindura kuna Ivan Ucha Ramirez